NLD ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်။ (ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၀)
အာဏာရပါတီ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အရေး တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေဆီကို ပထမဆုံး သွားရောက်ကြဖို့ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ စတင်မယ့် ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်မှာ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ NLD စီစဉ်ညွှန်ကြားထားပါသလဲ။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မဆုမွန်က စုစည်းတင်ပြပေးပါမယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီအနေနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဘုံသဘောတူညီချက်တွေရနိုင်ဖို့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီတွေ သဘောထားဆန္ဒတွေသိရှိနိုင်ဖို့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမယ့် ခေါင်းဆောင် ၃ ဦးကို ဒီဇင်ဘာလဆန်းက ရွေးချယ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုကို ဦးဆောင်မယ့် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၊ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့ ဦးအင်ထုံးခန်းနော်ဆန်တို့ သုံးဦး တင်ပြလာတဲ့ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေဆီ ကွင်းဆင်းသွားရောက်မယ့်အရေး ကို နေပြည်တော်က NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာ အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NLD ကပြောပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေကို သွားရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့ NLD ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က သတင်းထောက်တွေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
"အဓိကကတော့ ကိုအောင်မိုးညိုတို့ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်တို့၊ ဦးအင်ထုံးခန်းနော်ဆန် တို့အဖွဲ့ ပြည်နယ်တွေ ဆင်းချင်တယ်ဆိုပြီး တင်ထားတာရှိတယ်။ အဲ့တာကို CEC က ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတာပေါ့နော် ပထမဆုံး ကချင်ကိုသွားပါ။ ပြီးရင် မွန်ကိုသွားပါ။ သွားရင် ပထမဆုံး ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့ရပါမလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ဘက်က ဆုံးဖြတ်ပေးတာက ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့ အရင်တွေ့ပါ။ အဲဒီမှာ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ပါမယ်ပေါ့နော် သူတို့ရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ပေးပါ။ နောက်တခါ ပြည်နယ်မှာ အနိုင်ရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးနဲ့တွေ့ပါ။ တွေ့ပြီးတော့မှ သူတို့ရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို တောင်းပါ။ အဲ့ဒါတွေ ပြီးတော့မှ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ စကားပြောပါဆိုပြီးတော့ ပြောထားတာပေါ့။ အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဒီ ကျနော်တို့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေက တိုင်းရင်းသား ဒေသခံတွေရဲ့အပေါ်မှာ သဘောထား ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ပြောကြမလဲဆိုတာ သူတို့နဲ့ အရင် ဆွေးနွေးပြီးတော့မှပဲ ကျန်တဲ့ဟာကို ဆက်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကချင်ပြည်နယ်ကို သူတို့ မနက်ဖြန် သွားပါမယ်။ မနက်ဖြန်သွားပြီးလို့ရှိရင် အပြန်မှာ သူတို့ မွန်ပြည်နယ်ကိုသွားပါမယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုပြီးမှပဲ သူတို့ report ပြန်တင်ပါမယ်။ အဲဒါပြီးတော့မှ ကျန်တဲ့ဟာတွေကို ဆက်သွားဖို့ ကျနော်တို့ ဒီကနေ CEC ကနေ ဘယ်သွားပါ ဆိုပြီး ပြန်ပြီး ညွှန်ကြားမှာပေါ့နော်။"
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာ အနိုင်ရပါတီ NLD ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာတွေပေးပို့လာတဲ့ ကိစ္စတွေ နောက် NLD ဘက်က ကန့်ကွက်လွှာတွေ တင်သွင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟိုဥပဒေ အထောက်ပြု အဖွဲ့ဘက်ကနေ ဥပဒေရေးရာပိုင်းတွေကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အကြောင်း အဓိကထားဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်လို့ NLD ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ရှင်းပြပါတယ်။
"ကန့်ကွက်လွှာတွေ တင်ကြတာပေါ့နော်။ ကနေ့ဆိုရင် ကန့်ကွက်လွှာတွေတင်တာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဘက်က တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ပြောကြားတာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြု ဦးအောင်ကြည်ညွှန့်က ဆွေးနွေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ NLD ဘက်က ကန့်ကွက်တာ ဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်၊ ကျနော်တို့က မေးတာပေါ့နော်. တခြားဘက်ကရော ကျနော်တို့ကို ကန့်ကွက်တာ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့။ အဲဒါက UEC ကို ဒါရိုက်ကန့်ကွက်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က စရင်းအတိအကျ မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ သွားတင်တဲ့လူတွေရဲ့ တွေ့တဲ့ဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ ဘယ်လောက် ကန့်ကွက်နေသလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့က သိမှာပေါ့နော်။ အဲဒီအကြောင်းအရာမှာ ကျနော်တို့က ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုက ဘယ်လို အကူအညီပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားထားပြီး အဆင်သင့်ပြင်ထားဖို့ဆိုပြီးတော့ ပြောတာပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့အရင်အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်တာတွေက နေပြည်တော်မှာ လာကြရတာကိုး။ ရှေ့နေတွေပါလာမယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါလာမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဘက်က ဗဟိုက ဘာစီစဉ်ပေးရမလဲဆိုတာတွေ အကြောင်းအရာတွေကို အကြမ်းဖျင်းဆွေးနွေးထားတာပေါ့။"
အစိုးရ နောက်ထပ် သက်တမ်းထပ်တိုးမယ့် မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ မတိုင်ခင် စပ်ကြား အစိုးရဖွဲ့ရေး ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်တွေရွေးချယ်ရေးကိစ္စ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးကိစ္စတွေကိုလည်း အဓိက ထားဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ NLD ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောပါတယ်။
"အခုဟာက ကျနော်တို့ NLD အစိုးရဆီကနေ နောက်လာမယ့် NLD က ပြန်ပြီး လက်လွှဲယူရမှာပါ ဆိုတော့ ကျနော်တို့မှာ အချိန်ရှိပါတယ်။ ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လုပ်လို့ရတယ်။ ငါးနှစ် အတွေ့အကြုံ ရှိပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်ဝန်ကြီးတွေက ဘယ်လိုဆိုတာ သူအကုန်သိ ထားပြီးသားပါ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူသိပြီးသား။ ဦးဝင်းမြင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ခဲ့တယ်၊ သမ္မတလုပ်ခဲ့တယ်၊ အားလုံးအကြောင်းအရာတွေမှာ အကုန်သိပြီးသား၊ သူအကုန်သိနေတာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်ပြောချင်တာ အချိန်ရှိတယ်။ သူတို့ဆီ ကျနော်တို့က သူတို့ ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်။ ဆိုတော့ ဒီဟာက အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကိုး လွှတ်တော်မှာလည်း လွှတ်တော် အတွေ့အကြုံတွေကလည်း ကျနော်တို့မှာ တော်တော်များများရတယ်။ အဲဒါတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်။"
ဒါကတော့ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ အာဏာရပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်း သတင်းမီဒီယာတွေကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
NLD ရဲ့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှနေဲ့ တှဆေုံ့မှု ခရီးစဉျ စတငျမညျ
အာဏာရပါတီ NLD အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျအနနေဲ့ တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့အရေး တိုငျးရငျးသားနယျမွတှေဖွေဈတဲ့ ကခငျြပွညျနယျနဲ့ မှနျပွညျနယျတှဆေီကို ပထမဆုံး သှားရောကျကွဖို့ ဒီကနေ့ နပွေညျတျောမှာကငျြးပတဲ့ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအစညျးအဝေးက ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျပါတယျ။ မနကျဖွနျမှာ စတငျမယျ့ ကခငျြပွညျနယျခရီးစဉျမှာ ဘယျလိုအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့တှဆေုံ့ဖို့ NLD စီစဉျညှနျကွားထားပါသလဲ။ ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ မဆုမှနျက စုစညျးတငျပွပေးပါမယျ။
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ပါတီအနနေဲ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုဖျောဆောငျနိုငျရေး ဘုံသဘောတူညီခကျြတှရေနိုငျဖို့ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီတှေ သဘောထားဆန်ဒတှသေိရှိနိုငျဖို့ ဦးဆောငျဆှေးနှေးမယျ့ ခေါငျးဆောငျ ၃ ဦးကို ဒီဇငျဘာလဆနျးက ရှေးခယျြတာဝနျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီတိုငျးရငျးသားတှနေဲ့တှဆေုံ့မှုကို ဦးဆောငျမယျ့ ဒေါကျတာအောငျမိုးညို၊ ဒျေါနနျးခငျထှေးမွငျ့နဲ့ ဦးအငျထုံးခနျးနျောဆနျတို့ သုံးဦး တငျပွလာတဲ့ တိုငျးရငျးသားနယျမွတှေဆေီ ကှငျးဆငျးသှားရောကျမယျ့အရေး ကို နပွေညျတျောက NLD ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအစညျးအဝေးမှာ အဓိက ဆှေးနှေးခဲ့ကွတယျလို့ NLD ကပွောပါတယျ။
အရငျဆုံး ကခငျြပွညျနယျနဲ့ မှနျပွညျနယျတှကေို သှားရောကျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခဲ့ကွတဲ့အကွောငျး NLD ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ အစညျးအဝေးအပွီးမှာတော့ NLD ပါတီ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျက သတငျးထောကျတှကေို အခုလိုပွောပါတယျ။
"အဓိကကတော့ ကိုအောငျမိုးညိုတို့ ဒျေါနနျးခငျထှေးမွငျ့တို့၊ ဦးအငျထုံးခနျးနျောဆနျ တို့အဖှဲ့ ပွညျနယျတှေ ဆငျးခငျြတယျဆိုပွီး တငျထားတာရှိတယျ။ အဲ့တာကို CEC က ဆုံးဖွတျခကျြပေးတာပေါ့နျော ပထမဆုံး ကခငျြကိုသှားပါ။ ပွီးရငျ မှနျကိုသှားပါ။ သှားရငျ ပထမဆုံး ဘယျသူတှနေဲ့ တှရေ့ပါမလဲဆိုတာကို ကနြျောတို့ဘကျက ဆုံးဖွတျပေးတာက ပွညျနယျအလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့နဲ့ အရငျတှပေ့ါ။ အဲဒီမှာ အောငျနိုငျရေးအဖှဲ့ပါမယျပေါ့နျော သူတို့ရဲ့ အသံတှကေို နားထောငျပေးပါ။ နောကျတခါ ပွညျနယျမှာ အနိုငျရတဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျအားလုံးနဲ့တှပေ့ါ။ တှပွေီ့းတော့မှ သူတို့ရဲ့ အမွငျသဘောထားတှကေို တောငျးပါ။ အဲ့ဒါတှေ ပွီးတော့မှ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှနေဲ့ စကားပွောပါဆိုပွီးတော့ ပွောထားတာပေါ့။ အဓိကကတော့ ကနြျောတို့ ပွညျနယျမှာ ရှိနတေဲ့ ဒီ ကနြျောတို့ NLD အဖှဲ့ဝငျတှကေ တိုငျးရငျးသား ဒသေခံတှရေဲ့အပျေါမှာ သဘောထား ဘယျလို အကွောငျးအရာတှေ ပွောကွမလဲဆိုတာ သူတို့နဲ့ အရငျ ဆှေးနှေးပွီးတော့မှပဲ ကနျြတဲ့ဟာကို ဆကျလုပျပါဆိုပွီးတော့ ပွောတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ကခငျြပွညျနယျကို သူတို့ မနကျဖွနျ သှားပါမယျ။ မနကျဖွနျသှားပွီးလို့ရှိရငျ အပွနျမှာ သူတို့ မှနျပွညျနယျကိုသှားပါမယျ။ အဲဒီ နှဈခုပွီးမှပဲ သူတို့ report ပွနျတငျပါမယျ။ အဲဒါပွီးတော့မှ ကနျြတဲ့ဟာတှကေို ဆကျသှားဖို့ ကနြျောတို့ ဒီကနေ CEC ကနေ ဘယျသှားပါ ဆိုပွီး ပွနျပွီး ညှနျကွားမှာပေါ့နျော။"
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲအတှငျးမှာ အနိုငျရပါတီ NLD ကို ရှေးကောကျပှဲ ကနျ့ကှကျလှာတှပေေးပို့လာတဲ့ ကိစ်စတှေ နောကျ NLD ဘကျက ကနျ့ကှကျလှာတှေ တငျသှငျးတဲ့ကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဗဟိုဥပဒေ အထောကျပွု အဖှဲ့ဘကျကနေ ဥပဒရေေးရာပိုငျးတှကေို ကူညီဆောငျရှကျပေးမယျ့အကွောငျး အဓိကထားဆှေးနှေးဖွဈပါတယျလို့ NLD ပါတီ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျက ရှငျးပွပါတယျ။
"ကနျ့ကှကျလှာတှေ တငျကွတာပေါ့နျော။ ကနဆေို့ရငျ ကနျ့ကှကျလှာတှတေငျတာ နောကျဆုံးဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့ဘကျက တငျထားတဲ့အကွောငျးအရာတှကေိုလညျး ကနြျောတို့ ပွောကွားတာပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ရဲ့ ဗဟိုဥပဒအေထောကျအကူပွု ဦးအောငျကွညျညှနျ့က ဆှေးနှေးပါတယျ။ ကနြျောတို့ NLD ဘကျက ကနျ့ကှကျတာ ဘယျနှဈခုရှိတယျ၊ ကနြျောတို့က မေးတာပေါ့နျော. တခွားဘကျကရော ကနြျောတို့ကို ကနျ့ကှကျတာ ဘယျလောကျရှိလဲဆိုတော့။ အဲဒါက UEC ကို ဒါရိုကျကနျ့ကှကျတဲ့အတှကျ ကနြျောတို့က စရငျးအတိအကြ မသိနိုငျပါဘူးတဲ့။ သှားတငျတဲ့လူတှရေဲ့ တှတေဲ့ဟာတှပေျေါမူတညျပွီးတော့မှ ဘယျလောကျ ကနျ့ကှကျနသေလဲ ဆိုတာကို ကနြျောတို့က သိမှာပေါ့နျော။ အဲဒီအကွောငျးအရာမှာ ကနြျောတို့က ဗဟိုဥပဒအေထောကျအကူပွုက ဘယျလို အကူအညီပေးနိုငျသလဲ ဆိုတာကို စဉျးစားထားပွီး အဆငျသငျ့ပွငျထားဖို့ဆိုပွီးတော့ ပွောတာပေါ့နျော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကနြျောတို့အရငျအတှအေ့ကွုံအရဆိုလို့ရှိရငျ ရှေးကောကျပှဲ ကနျ့ကှကျတာတှကေ နပွေညျတျောမှာ လာကွရတာကိုး။ ရှနေ့တှေပေါလာမယျ၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှပေါလာမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့ဘကျက ဗဟိုက ဘာစီစဉျပေးရမလဲဆိုတာတှေ အကွောငျးအရာတှကေို အကွမျးဖငျြးဆှေးနှေးထားတာပေါ့။"
အစိုးရ နောကျထပျ သကျတမျးထပျတိုးမယျ့ မတျလ ၃၁ရကျနေ့ မတိုငျခငျ စပျကွား အစိုးရဖှဲ့ရေး ဝနျကွီးခြုပျအသဈတှရှေေးခယျြရေးကိစ်စ လှတျတျောချေါယူရေးကိစ်စတှကေိုလညျး အဓိက ထားဆှေးနှေးဖွဈခဲ့ကွတယျလို့ NLD ပါတီ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျက ပွောပါတယျ။
"အခုဟာက ကနြျောတို့ NLD အစိုးရဆီကနေ နောကျလာမယျ့ NLD က ပွနျပွီး လကျလှဲယူရမှာပါ ဆိုတော့ ကနြျောတို့မှာ အခြိနျရှိပါတယျ။ ပွောခငျြတာက ကနြျောတို့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လုပျလို့ရတယျ။ ငါးနှဈ အတှအေ့ကွုံ ရှိပါတယျ။ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဆိုရငျလညျး ဘယျဝနျကွီးတှကေ ဘယျလိုဆိုတာ သူအကုနျသိ ထားပွီးသားပါ။ လှတျတျောကိုယျစားလှယျပတျသကျပွီးတော့လညျး သူသိပွီးသား။ ဦးဝငျးမွငျ့ လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ လုပျခဲ့တယျ၊ သမ်မတလုပျခဲ့တယျ၊ အားလုံးအကွောငျးအရာတှမှော အကုနျသိပွီးသား၊ သူအကုနျသိနတော။ အဲဒီတော့ ကနြျောပွောခငျြတာ အခြိနျရှိတယျ။ သူတို့ဆီ ကနြျောတို့က သူတို့ ဆှေးနှေးကွမှာပေါ့နျော။ ဆိုတော့ ဒီဟာက အစိုးရအဖှဲ့အစညျးဖွဈတာကိုး လှတျတျောမှာလညျး လှတျတျော အတှအေ့ကွုံတှကေလညျး ကနြျောတို့မှာ တျောတျောမြားမြားရတယျ။ အဲဒါတှပေျေါမှာ မူတညျပွီးတော့ စဉျးစားဆုံးဖွတျမှာပေါ့နျော။"
ဒါကတော့ ဒီကနေ့ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပတဲ့ အာဏာရပါတီ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအစညျးအဝေးမှာ ရှဆေ့ကျဆောငျရှကျကွမယျ့ နိုငျငံရေးလုပျငနျးစဉျတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ အဓိကထားဆှေးနှေးခဲ့တဲ့အကွောငျး သတငျးမီဒီယာတှကေို ရှငျးလငျးပွောဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
NLD က ပါတီဝင် လွှတ်တော်အမတ်သစ်တွေကို သင်တန်းပေးဖို့ပြင်ဆင်နေ